တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: နေထိုင်မကောင်းသော နေ့ရက်များ
Ma May so dar "Kyi Aye" lar ?
3/13/2007 7:20 AM
ဗုဒ္ဓေါ … ကျမ က ကြည်အေး မဟုတ်သလို ဆရာမကြီး (ဒေါ်)ကြည်အေးရဲ့ ခြေဖျားကိုတောင် မမီပါဘူးရှင်။
ဖျားတဲ့ည ကဗျာက တကယ်ပဲ ဖျားနေတုန်း ရောက်တတ်ရာရာ လျှောက်ရေးမိတာပါ။ ကြည်အေးကဗျာကို ခိုးချသလို ဖြစ်နေလို့များလား။
အတည်မကျ …. စသည် စသည် ရေးထားတဲ့ ဆရာမကြီး ဒေါ်ကြည်အေးရဲ့ “တစ္ဆေ” ကဗျာနဲ့ ဆင်တူရိုးမှား ခိုးချသလိုများ ဖြစ်နေခဲ့ရင် တောင်းပန်လိုက်ပါရဲ့။ ရေးချင်ရာ လျှောက်ရေးထားတဲ့ ဒီကဗျာကို ဘယ်မှမပို့ဘဲ ချောင်ထိုးထားခဲ့ရာက အခု နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ ဒီကဗျာလေး ပြန်သတိရလို့ ကိုယ့်ဘလော့ပေါ် ကိုယ် တင်လိုက်မိတာပါ။
ဆေးခန်းသွားရင် သက်သာမှာကို ပေပြီးနေတာကိုး..ဒေါ်ကြည်အေး. အဲ.. မမေဓာဝီရဲ့။ :P
3/14/2007 2:01 AM
Ma May ko khoe cha tae loe pyaw par boo. poem ko tha baw kya loe 'sa tar par" . ku ,nay kg pi lar? myan myan nay kg par say.
3/16/2007 6:40 AM
myanmaramyar su har kyan mar yay koayu ma saik tat kya buu, kyan mar yayathi ma shi kya buu, shi thaw le, pay kat kat lote tat ee.. so tho kyaung,,, myanmar twe yay tein nit ya shar ee.. kyan mar yay ko, kyan mar tone hmar ga yu saik par lay..